Inhloko ZeNdaba Ntulikazi 27, 2021
Ntulikazi 27, 2021
Inani labantu ababulawa yiCovid-19 labahlolwa betholakala belayo liya liqansa e Zimbabwe osekudale ukuba abalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka kwabo ngodaba lokuvulwa kwezikolo phakathi kwesimo esinje.
Abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eyeCovid 19 Vaccine, eZimbabwe jikelele, sebesedlula isigidi esisodwa-1,491,493 njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose eyisikhombisa-687,216, asebehlatshwe eyesibili.
Uhulumende ubika ukuba usesehluleka ukuphatha eyedwa umsebenzi wokuhlaba abantu amajekiseni wokuzivikela kuCovid 19 ngoba sebebanengi abantu asebesiza befuna ukuhlatshwa. Kungalesi sizatho uhulumende esenxusa abenhlanganiso ezizimeleyo lamankampani ukuthi bancedise kulolu hlelo labo bahlabe lawa majekiseni kodwa umsebenzi uqondiswa lugatsha lwezempilakahle.
Kambe intengo youkudla lempahla ezitolo iqansa ngenxa yodlakela olwenzakala kwele South Africa Na?
Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhathazekile ngengxabangxoza eqhubeka eSwaziland, ngesikhathi eleMelika selikhuthaze ukuthi kube lokuthula kulelolizwe.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo ‘The Connection’ sikhangela ukuqhubeka kokuqansa kwenani lababanjwa beleCovid 19 lasebebulawa yileli gcikwane eZimbabwe .